Ny Tanjon’ny Mpaka Sary Iray Mba Hanova Ny Fomba Fijerin’ny Olona Ireo Sisa Tsy Matin’ny Dotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jolay 2016 17:37 GMT
Arjun Shah, mpaka sary iray momba ny dokambarotra sy ny lamaody, dia nanana aingam-panahy hanomboka ny fanentanana mba hanova ny fomba fijerin'ny olona ireo sisa tsy matin'ny dotra, ary manao izay ahazoan'izy ireo mandray ny fahamendrehana sahaza azy. Avy any Chitwan i Arjun, tany lemaka any Nepal atsimo. Ekena ho iray amin'ireo mpakasary voalohany amin’ny mpiray taona aminy izy, nasongadina tao amin'ny gazetiboky iraisam-pirenena iray malaza miresaka momba ny fomba fiaina ny asany. Ankoatr'izany, nanatontosa dokambarotra miavaka maro ho an'ny marika iraisam-pirenena sy ao an-toerana nandritra ny 12 taona mahery izy amin’izany sehatra izany.
Nanomboka naka sary an’i Jayatri Tamang izy, iray sisam-paty tamin’ny dotra, ho an’ny fonon’ny gazetiboky iray momba ny fialambolim-bahoaka. Lafo avokoa ireo gazetiboky ary lasa modely amin’ny fandraisana anjara i Jayatri. Tamin'ity taona ity, miverina miaraka amin'ny ekipa vehivavy be herim-po izy, sisa tsy matin'ny dotra avokoa ireo, izay aseho ao amin'ny pejy malamalama amin’ny kalandrie izay notontosainy.
Ny ampahany betsaka tamin'ilay fivarotana ny kalandrie dia alefa any amin’ny tanjona izay manampy ireo mararin’ny dotra ho fitsaboana ao amin’ny Sushma Sushma Koirala Memorial Hospital, any Nepal.